निर्मलाको नाममा न्यायको बलात्कारः डिएनए टेस्ट प्रहरीकै प्रयोगशालामा ! – Everest Dainik – News from Nepal
निर्मलाको नाममा न्यायको बलात्कारः डिएनए टेस्ट प्रहरीकै प्रयोगशालामा !
काठमाडौं, असोज १५ । कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा आशंका गरिएका निलम्बित एसपी डिल्लीराज विष्ट, उनका छोरा किरण विष्ट र किरणका साथी आयुष विष्टको डिएनए रिपोर्ट आएको छ । परीक्षणले उनीहरूलाई सफाइ दिएको छ ।
निर्मलाको शवबाट संकलित नमुना आफूँसँगै राखेर प्रहरीले आशंका गरिएका तीनजनाको रगतको नमुना मात्र केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला पठाएको थियो । रगतका आधारमा विधिविज्ञानले तीनजनाको डिएनए विश्लेषण गरेर रिपोर्ट प्रहरीलाई नै पठायो । प्रहरीले आफ्नो प्रयोगशालामा विश्लेषण गर्दा दुईथरी नमुना म्याच नभएको ठहर गर्यो ।
निर्मलाको शवबाट संकलित नमुना पनि पाएको भए विधिविज्ञानले नै म्याच गर्छ कि गर्दैन भनेर किटान गर्न सक्थ्यो । तर, निर्णायक काम प्रहरी आफैंले गर्यो। आरोपी प्रहरी र उनका आफन्त निर्दोष हुन सक्छन् । तर, उनीहरूलाई सफाइ दिन सरकार किन यति गैरजिम्मेवार बन्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन । जनतालाई विश्वासमा लिन सरकारले आवश्यक ठानेकै छैन । निर्मलाको शव पखाल्ने, उनका कपडा धुने, अचानक जलाउने र नक्कली अभियुक्त खडा गर्ने प्रहरी अधिकारीको मनसाय के हो ?
प्रहरी यति गैरजिम्मेवार र असंवेदनशील किन भयो ? प्रहरी र तिनका आफन्तमाथि नै अनुसन्धान होस् भनेर कञ्चनपुरदेखि ताप्लेजुङसम्मका जनताले प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनमा एकजनाको ज्यान गयो, एकजना अस्पतालमा अचेत छन्, कैयौँ घाइते भए । जनताले यति ठूलो मूल्य चुकाएपछि सत्य–तथ्य जनतासामु राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको गृह प्रशासनले संदिग्ध सबैको डिएनए टेस्ट केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा होइन, प्रहरीकै प्रयोगशालामा गरेको छ ।
अनुसन्धानमा असंवेदनशील प्रहरीले संकलन गरेको डिएनएको नमुनामाथि नै प्रश्नचिह्न उठेको छ । त्यसैले पनि वास्तविक अपराधी पत्ता नलाग्ने खतरा बढेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले २ वटा गल्ती गरेको संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा खुलासा गरे ।
सनाखत मुचुल्कामा निर्मलाका बुबा यज्ञराजको औंठाछाप लगाइएको छ । जब कि, मुचुल्का उठाउँदा यज्ञराज भारतमा थिए । ११ गते मुचुल्का बनाउँदा आमालाई पनि हस्ताक्षर गर्न लगाएको र पर्सिपल्ट बुबालाई त्यही मुचुल्कामा औँठाछाप लगाउँदा मिति अघिल्लो परेको प्रहरीको भनाइ छ ।
प्रहरीले अनुसन्धानमा सुरुमै चरम लापरबाही गरेकाले त्यसपछिको मिहिनेत अर्थहीन बनेको छ । अहिले पनि कञ्चनपुरमा प्रहरीका आधा दर्जन टोली सक्रिय छन् । तर, कसैले पनि सुराकसमेत पाउन सकेका छैनन् । सिआइबीका एसएसपी ठाकुर ज्ञवालीको नेतृत्वमा एक महिनाअघि नै टोली खटिएको थियो । त्यस्तै, प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट पनि खटिएको छ ।
एसपी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा अनुसन्धानमा सघाउन महिला प्रहरीको अर्को टोली कञ्चनपुरमा छ । त्यसबाहेक विशेष ब्युरोलगायत निकायबाट गोप्य टोलीहरू पनि कञ्चनपुरमा सक्रिय रहेको स्रोत बताउँछ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
ट्याग्स: Dilli Bist, Nirmla pant, Rape